Miontana amin’ny fanoheran’i Naomi Osaka kalazan’ny tennis ho fanohanany ny Black Lives Matter i Japana · Global Voices teny Malagasy
Miontana amin'ny fanoheran'i Naomi Osaka kalazan'ny tennis ho fanohanany ny Black Lives Matter i Japana
Voadika ny 11 Septambra 2020 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, 日本語, русский, English
“Manazava ny hetsika ataony amin'ny tontolon'ny tennis hanoherany ny fitifiran'ny polisy an'i Jacob Blake i Naomi Osaka.” Pikantsary tamin'ny 28 aogositra 2020, avy amin'ny fantsona YouTube ESPN ofisialy.
Tamin'ny 27 Aogositra, nampiato vonjimaika ny fandraisany anjara amin'ny fifaninanana tennis Western & Southern Open tany Etazonia ilay kalazan'ny tennis Japoney Naomi Osaka taorian'ny nitifiran'ny polisy tao Kenosha, Wisconsin, an'i Jacob Blake. Nahazo dera ny “feo vaovaon'i” Osaka, ary efa tsinjo mialoha koa mazava loatra fa nahazo tsikera ihany koa tany Japana.
Niteraka tsikera maventy sy tsy fankatoavan'ny sivily nanerana ny firenena ny fitifirana an'i Jacob Blake tao Wisconsin tamin'ny 23 Aogositra 2020, tafiditra anatin'ny tarazon-kerisetra manan-tantara amelezana ny mainty sy ny teratany voalohany avy amin'ny polisin'i Etazonia.
Athleta sy ekipa mpanao fanatanjahantena maro no nanatontosa fitokonana tsy ara-dalàna ho fanoherana ny fitifirana an'i Blake. Tamin'ny sioka iray tamin'ny 27 aogositra, nanambara i Osaka fa hiala amin'ny fifaninanana Western & Southern Open izy “hanombohan'ny resaka ao amin'ny fanatanjahatena anjakazakan'ny fotsy an'isa” (tennis):
Taorian'ny fanambaràn'i Osaka, nanambara ny mpikarakara ny fifaninanana fa miato vetivety ny lalao ny alakamisy, 27 aogositra, ka hiverina amin'ny laoniny izany ny zoma 28 aogositra. Nanambara avy eo i Osaka fa hiverina indray ho ao amin'ny fifaninanana izy, hiditra ao amin'ny kianja fanaovana tennis hitafy ny T-shirt Black Lives Matter T-shirt.
Quite the 48 hours from @naomiosaka ✊? pic.twitter.com/0hPzDWLNWC
Nahavalalanina ny 48 ora avy amin'i Naomi Osaka.
[Sary] Niditra ny kianja filalaovana tennis amin'ny t-shirt maity sy fotsy maneho endrika ny hetsika Black Lives Matter ny athleta Naomi Osaka.
Tamin'ny fanambaràna iray nalefa tany amin'ny sehatra fampitam-baovao maro, nilaza i Osaka :
Araka ny efa fantatrareo, niala tamin'ny fifaninanana aho omaly ho fanohanana ny tolona iadiana amin'ny tsy rariny ara-piarahamonina sy ny fitohizan'ny herisetran'ny polisy. […] Efa nivonona (ary vonona) hanome ny lalao ho an'ny mpifanandrina amiko. Na izany aza, taorian'ny fanambarana nataoko sy ny fifampiresahana lava dia lava nifanaovana tamin'ny WTA (Fiarahan'ny tennis vehivavy) sy ny USTA (Fiarahan'ny tennis Etazonia), dia nanaiky ny fangatahan-dry zareo aho hilalao ny zoma. Nanolo-kevitra ry zareo ny hanemotra ny lalao rehetra ho amin'ny zoma ka tao an-tsaiko dia efa nanome fifantohana bebe kokoa tamin'ny hetsika izany.
Naomi Osaka, izay heverin'ny maro ho sangany manerantany amin'ny vehivavy mpilalao tennis, dia olompirenena Japoney manana lova japoney sy haisianina, ary nihalehibe tany Etazonia miteny Japoney sy Kiriolona. Mba ho fanarahana ny fitakian'ny mahaolompirenena japoney, izay tsy manaiky zom-pirenena roa ho an'olona iray, sy hisoloany tena an'i Japana tamin'ny lalao Olaimpika 2018, dia nanaisotra ny mahaolompirenen'i Etazonia azy izy.
Olo-malaza tiam-bahoaka ao Japana i Osaka, noho ireo zavabitany eny amin'ny kianjan'ny tennis, sy ny fitiavany mitsikitsiky an-tserasera. Saingy na teo aza izany, niaritra fanafihana fanavakavaham-bolonkoditra an-tserasera i Osaka, indraindray avy amin'ny sioka heverina ho tsy dia manao ahoana loatra, ary indraindray noho ny fanohanana sy fanentanana #BlackLivesMatter ao Japana [mg].
Mpisera Twitter iray malaza, izay mamariparitra ny tenany ho “Hapa Japoney-Amerikana” (olona aziatika na taranaky ny nosy pasifika ilany), tao amin'ny sioka iray nisy an'aliny nizara nanangona ireo tsikera isankarazany namely an'i Osaka tao Japana:
Tena mampiaiky volana tokoa ny fanehoan-kevitra amin'ny teny japoney amin'ny fanapahan-kevitr'i Naomi Osaka hanao ankivy ny lalao tennis :
«Mihevitra aho fa tsy tena japoney izy, amin'izany rehetra izany.»
«Eritrereto ny fahasahiranana atrehin'ny mpanohana azy ara-bola.»
«Tsy misy ilaina izany fanaovana ankivy lalao izany.»
«Mendrika ilay boay ny nitifiran'ny polisy azy.»
Nibedy an'i Osaka amin'ny teny anglisy i Yamaoka Tetsuhide, mpaneho hevitra iray mpandala ny mahazatra hiringiriny malaza, ka lasa lavitra hatramin'ny fampiasana voambolana fanafohezana sady mialanjalanja orona am-pananjana “chan” rehefa niresaka tamin'ilay kintan'ny tennis malaza manerantany:
Naomi Chan, haiko izay tsy maintsy ho fahatsapanao saingy heveriko fa olana iray hafa tanteraka io. Afaka maneho malalaka ny ahiahinao amin'ny fomba rehetra ianao, saingy miangavy aza miala amin'ny kianjan'ny tennis satria mpilalao tennis matihanina tianay ianao.
Na izany aza, maro ireo olona ao Japana no naneho ny fanohanany an'i Osaka, ao anatin'izany i Fukuyama Kazuhito, mpahay lalàna iray malaza sady kandidà ho ben'ny tanànan'i Kyoto.
Rtoa Naomi Osaka :
« Alohan'ny maha-athleta ahy dia vehivavy mainty aho. Ary amin'ny maha-vehivavy mainty ahy, dia mahatsapa aho fa misy ny raharaha lehibe eo ampelatanana mila fifantohana avy hatrany, toy izay mijery ahy milalao tennis. »
Mety hoe safidy sarotra. Manohana an'i Naomi Osaka aho.
Huffington Post : «Nanambara hanao ankivy lalao iray i Naomi Osaka ho fanoherana ny tifitra ataon'ny polisy amin'ny lehilahy mainty iray»
Ishigaki Noriko, mpanolotsaina monisipaly avy ao Sendai sady mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra lehibe ao Japana :
Noho ny fanoherana sy ny fikatrohan'i Naomi Osaka, nahemotry ny mpikarakara ny fifaninanana, ho «fanambaràna hanoherana ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny tsy rariny ara-piarahamonina». Tsy manohitra ny tenany i Osaka raha nanaiky hiverina handray anjara, satria efa namaly (ny hafatr'i Osaka) ny fifaninanana.
Miray hina ho fanoherana izay endrika fanavakavahambolonkoditra rehetra ara-drafitra aho.
Lahatsoratry ny NHK : « Niverina nandray anjara tamin'ny fifaninanana tennis i Naomi Osaka. »
Raha niverina nilalao indray i Osaka tamin'ny zoma 28 aogositra, dia voatery niala haingana indray, noho ny ratra amin'ny hozabe amin'ny voditongotra.